Manjakamiadana: noho ny fanahiana fihotsahana, olona 42 nafindra toerana maika | NewsMada
Manjakamiadana: noho ny fanahiana fihotsahana, olona 42 nafindra toerana maika
Par Taratra sur 10/01/2020
42 izy ireo, avy amina fianakaviana maromaro eny amin’ny fokontany Manjakamiadana. Noho ny fanahiana ny fihotsahan’ny tany eny amin’iny toerana iny, voatery nafindra toerana maika ao amin’ny Fkt Manjakamiadana izy ireo ankehitriny.
Hisorohana ny loza mety hitranga toy ny fihotsahan’ny tany eny amin’ny faritra ambony ny Renivohitra, indrindra ny eny Manjakamianadana, olona miisa 42 voatery nafindra monina. Araka ny tatitra ofisialy navoakan’i BNGRC, omaly maraina, voatery napetraka eny amin’ny fokontany eny an-toerana ireo fianakaviana ireo ankehitriny. Voatanisa ao anatin’izany fa nahatratra 371 ireo traboina amin’izao fotoana izao ary teny amin’ny faritra Analamahitsy Tanàna ny nahitana ny isa ambony indrindra izay nahatratra 100. Fantatra amin’izany fa trano miisa 20 ny dibo-drano vokatry ny rotsak’orana. Manaraka izany ny eny Tsiadana. Miisa 90 ireo traboina eny an-toerana ka miisa efatra ireo trano simba. Vokany, miisa 14 ireo tsy manan-kialofana sy voatery nafindra toerana. Nambaran’ny BNGRC tao anatin’ny tatitra nataony fa nahatratra 80 ireo traboina eny Andavamamba Ambilanibe ka voatery nafindra toerana. Trano miisa 12 eny an-toerana ihany koa no simban’iny orambe nikija iny. Traboina ihany kosa ny 30 amin’ireo mponina eny Farango amin’izao fotoana izao. Notanterin’ny BNGRC fa miisa 10 ireo traboina eny Ambatomaro ary trano roa simba taorian’iny orambe iny. Miisa dimy ireo traboina eny Ambohimiandra sy eny Ambohipotsy ka trano iray lasibatry ny fihotsahana tamboho lehibe iray eny Ambohimiandra raha trano iray hafa simba vokatry ny fihotsahan’ny orana. Raha totalina izany, nahatratra 136 ireo olona voatery nafindra toerana, vokatr’iny orambe nikija iny izay naharitra manodidina ny ora roa.
Olona roa hafa maty
Lehilahy iray hita faty natsingevan’ny rano eny amin’ny “barrage” Tanjombato, omaly maraina. Nambaran’ny vondron’ny mpamonjy voina nanatanteraka ny fampiakarana azy fa tsy nisy ny taratasy namantarana ilay lehilahy. Voalazany ihany koa fa tsy mbola nihoatra ny iray andro io vata-mangatsiaka io ny tao anaty ny rano.
Ankoatra izay, vehivavy iray miasa ao amin’ny Himo na Haute intensité de main d’oeuvre eny amin’ny fokontanin’Antohomadinika-Antsahalova na FAAMI namoy ny ainy nilatsaham-potaka teny amin’ny faritra Andraharo iny, afakomaly, raha iny izy hamonjy fodiana iny. Namela vady sy kamboty miisa roa ity farany. Raha ny nambaran’ny polisy, nanano sarotra ny lalana nahatongavana teny amin’ilay toerana nisy loza ka voatery nandeha lakana izy ireo nahafahany nanatanteraka ny asany.